Kubatsira Voukama Kuti Vave Zvapupu | Yokudzidza
Kubatsira Voukama Kuti Vave Zvapupu
Zvatingaita Kuti Tirambe Tichizvipira
Remekedzai Vakwegura Vari Pakati Penyu
Unoti ‘Hungu Asi Panguva Imwe Chete Uchiti Aiwa’ Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Nharireyomurindi—Yekudzidza | March 2014
JESU KRISTU akati: “Enda kumba kuhama dzako, udziudze zvinhu zvose zvawaitirwa naJehovha nengoni dzaakuitira.” Panguva iyoyo anofanira kunge aiva muGadhara, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweGungwa reGarireya, achitaura nemumwe murume aida kuva muteveri wake. Mashoko aJesu anoratidza kuti aiziva kuti vanhu vanowanzoda kuudza hama dzavo zvinhu zvakanaka zvavanenge vanzwa.—Mako 5:19.
Mazuva ano vanhu vanowanzodawo kuudza hama dzavo zvavanenge vanzwa, asi izvozvo zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo kupfuura dzimwe. Saka munhu paanova munamati waMwari wechokwadi Jehovha, anowanzoda kuudzawo hama dzake zvaanenge ava kutenda. Asi angazviita sei? Angabatsira sei hama dzake dzine chitendero chakasiyana nechake kana kuti dzisingatombonamati? Bhaibheri rine mazano anobatsira.
Jesu paaiva panyika, Andreya ndiye akava mumwe wevanhu vokutanga kuziva kuti Jesu aiva Mesiya. Uye ndiani waakabva audzawo? “Kutanga [Andreya] akawana mukoma wake, Simoni, akati kwaari: ‘Tawana Mesiya’ (zvinoreva kuti, Kristu, kana zvashandurwa).” Andreya akaenda naPetro kuna Jesu uye izvi zvakaita kuti Petro ave nemukana wokuva mudzidzi waJesu.—Joh. 1:35-42.
Papfuura makore matanhatu, Petro paaigara muJopa, akakumbirwa kuti aende kuchamhembe kuKesariya kuti anoona mukuru weuto ainzi Koneriyasi. Ndivanaani vaakawana vari mumba maKoneriyasi? “Koneriyasi akanga [akamirira Petro nevaaifamba navo] uye akanga aunganidza hama dzake neshamwari dzapedyo.” Saka Koneriyasi akapa hama dzake mukana wokuti dzinzwe Petro achitaura uye wokuti dzisarudze zvokuita pane zvadzainge dzanzwa.—Mab. 10:22-33.
Tingadzidzei pane zvakaitwa naAndreya naKoneriyasi kuhama dzavo?
Andreya naKoneriyasi havana kungosiya hama dzavo vachiti dzichazongowanawo chokwadi neimwe nzira. Andreya akaenda naPetro kuna Jesu, uye Koneriyasi akaronga kuti hama dzake dzinzwe Petro achitaura. Asi Andreya naKoneriyasi havana kumanikidza hama dzavo kana kuedza kudzinyengedza kuti dzive vateveri vaKristu. Chidzidzo chipi chatinowana? Zvakanaka kuti titevedzerewo zvavakaita. Tinogona kuudza hama dzedu zvimwe zvatinotenda uye kuita kuti dzive nemukana wokunzwa chokwadi chiri muBhaibheri uye kuti dzionane nevatinonamata navo. Asi tinobvuma kuti dzine rusununguko rwokusarudza zvadzinoda uye hatidzimanikidzi kuti dzide chokwadi. Kuti tione kuti tingabatsira sei hama dzedu, ngatikurukurei nezvemurume nomudzimai vanonzi Jürgen naPetra, vari kuGermany.
Petra akadzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha uye nokufamba kwenguva akabhabhatidzwa. Murume wake Jürgen aiva nechinzvimbo muchiuto. Pakutanga Jürgen haana kufara nezvakaitwa nemudzimai wake. Asi nokufamba kwenguva akazoona kuti Zvapupu zvinodzidzisa chokwadi chiri muBhaibheri. Akazozvitsaurirawo kuna Jehovha uye iye zvino ava mukuru muungano yavo. Izano ripi raanopa vamwe kana vachida kubudirira kuparidzira voukama vane chitendero chavo?
Jürgen anoti: “Hatifaniri kumanikidza hama dzedu kukurukura nezveBhaibheri uye kuramba tichingotaura nezvazvo. Izvi zvingaita kuti dziwedzere kusafarira. Zviri nani kana tikadziudza zvishoma nezvishoma tichizviita nounyanzvi. Zvinobatsirawo kana tikaita kuti voukama vazivane nevatinonamata navo vezera ravo uye vanofarira zvavanofarira. Kuita izvi kunoita kuti zvive nyore kuvabatsira.”
“Hatifaniri kumanikidza hama dzedu kukurukura nezveBhaibheri uye kuramba tichingotaura nezvazvo.”—Jürgen
Muapostora Petro uye hama dzaKoneriyasi, vakakurumidza kugamuchira chokwadi cheBhaibheri. Asi vamwe vanhu vemunguva iyoyo vaida nguva yakareba kuti vazova vadzidzi vaJesu.
VANUN’UNA VAJESU VAKAITAWO SEI?
Hama dzaJesu dzakawanda dzakatenda maari paaiita ushumiri hwake. Somuenzaniso, zvinoita sokuti muapostora Jakobho naJohani vaiva neukama naJesu uye kuti amai vavo, Sarome, vaiva munun’una waamai vaJesu. Sarome angangodaro aiva mumwe wevakadzi “vazhinji vakanga vachivashumira [Jesu nevaapostora vake] nezvinhu zvavo”—Ruka 8:1-3.
Asi vamwe vomumhuri yaJesu havana kukurumidza kuva nokutenda. Somuenzaniso, pane imwe nguva Jesu ava negore abhabhatidzwa, mapoka evanhu akaungana mumba kuti amunzwe achidzidzisa. “Asi hama dzake padzakazvinzwa, dzakabuda kuti dzinomubata, nokuti dzakanga dzichiti: ‘Ava kupenga.’” Pane imwe nguva, vanun’una vaJesu pavaikurukura naye nezverwendo rwake, haana kuvapindura zvakajeka. Nei akadaro? Nokuti “vanun’una vake vakanga vasingatendi maari.”—Mako 3:21; Joh. 7:5.
Tinodzidzei kubva pamabatiro akaita Jesu hama dzake? Haana kugumbuka vamwe pavakamuti ainge ava kupenga. Kunyange pashure pokunge amutswa, akaramba achikurudzira hama dzake paakazviratidza kumunun’una wake Jakobho. Kuoneka kwakaita Jesu hakuna kungobatsira Jakobho chete asi zvinoita sokuti kwakabatsirawo vamwe vanun’una vake kuona kuti zvechokwadi ndiye aiva Mesiya. Saka vanun’una vaJesu ava vaiva pamwe nevaapostora uye vamwe vadzidzi muimba yepamusoro muJerusarema uye vanofanira kunge vakagamuchira mudzimu mutsvene. Nokufamba kwenguva Jakobho naJudha, vamwe vevanun’una vaJesu, vakazowana ropafadzo muungano.—Mab. 1:12-14; 2:1-4; 1 VaK. 15:7.
VAMWE VANODA NGUVA YAKAREBA
‘Tinogona kubudirira chaizvo kana tikaramba tiine mwoyo murefu.’—Roswitha
Sezvaingoitikawo munguva yevaKristu vepakutanga, mazuva ano vamwe voukama vanoda nguva yakati rebei vasati vatanga kufamba munzira inoenda kuupenyu. Somuenzaniso, funga nezvaRoswitha, uyo aishingaira chaizvo muchechi yeRoma pakabhabhatidzwa murume wake semumwe weZvapupu zvaJehovha muna 1978. Pakutanga Roswitha aipikisa murume wake. Asi nokufamba kwenguva, akanga asisapikisi uye akazoona kuti Zvapupu zvinodzidzisa chokwadi. Akazobhabhatidzwa muna 2003. Chii chakaita kuti achinje? Murume waRoswitha haana kugumburwa nokupikiswa kwaaiitwa asi akapa mudzimai wake nguva yokuti achinje mafungiro ake. Roswitha anopa zano rokuti chii? ‘Tinogona kubudirira chaizvo kana tikaramba tiine mwoyo murefu.’
Monika akabhabhatidzwa muna 1974, uye vanakomana vake vaviri vakavawo Zvapupu papera makore gumi. Kunyange zvazvo murume wake Hans asina kumbopikisa kutenda kwavo, akazobhabhatidzwa muna 2006. Kubva pane zvakaitika kumhuri iyi, izano ripi rainopa rayakaona richibatsira? Inoti: “Ramba wakavimbika kuna Jehovha uye usatsigira zvinhu zvisingaenderani nezvaunotenda.” Chokwadi zvaikosha kugara vachiudza Hans kuti vanomuda. Uye havana kumborasa tariro yokuti achagamuchira chokwadi.
ITAI KUTI MVURA YECHOKWADI IPEDZE NYOTA YAVO
Pane imwe nguva Jesu akafananidza chokwadi nemvura inopa upenyu husingaperi. (Joh. 4:13, 14) Tinoda kuti nyota ine hama dzedu ipere nokunwa mvura yechokwadi inotonhorera uye yakachena. Chokwadi hatidi kuti vakachidzwe nokuti tinenge tavapa mvura yakawandisa panguva imwe. Matsananguriro atinoita zvatinotenda anogona kuita kuti nyota yavo ipere kana kuti vakachidzwe. Bhaibheri rinoti, “mwoyo womunhu akarurama unofungisisa kuti upindure” uye rinotizve “mwoyo womunhu akachenjera unoita kuti muromo wake uratidze njere, uye unowedzera kunyengetedza pamiromo yake.” Tingashandisa sei zano iri?—Zvir. 15:28; 16:23.
Mudzimai angada kuudza murume wake zvaanotenda. Kana ‘akafungisisa asati apindura,’ achanyatsosarudza mashoko ake uye haazoiti zvechivhundumukira. Haafaniri kuzviita akarurama uye kuzviona seari nani kupfuura murume wake. Mashoko aanotaura anyatsofunga anogona kuzorodza uye kuita kuti pave nerugare. Murume wake anenge akadekara uye ari nyore kutaura naye panguva dzipi? Inyaya dzipi dzaanofarira kutaura kana kuti kuverenga nezvadzo? Anofarira zvesayenzi, zvematongerwo enyika kana kuti zvemitambo here? Angaitei kuti murume wake ade kufarira Bhaibheri ukuwo achiremekedza manzwiro uye mafungiro ake? Kufunga zvinhu zvakaita seizvi kuchabatsira mudzimai kuti ataure uye aite zvinhu zvinoratidza uchenjeri.
Kuti tibudirire kubatsira vomumhuri medu vasati vava Zvapupu, hatifaniri kungogumira pakutsanangura zvatinotenda zvishoma nezvishoma. Zvatinotaura zvinofanirawo kuenderana nezvatinoita.
Jürgen ambotaurwa nezvake anoti: “Ramba uchiita zvinotaurwa neBhaibheri mazuva ose. Izvozvo zvinobatsira chaizvo pakuita kuti hama yako itange kuona zvakanaka zvauri kuita kunyange zvazvo ingasakuudza.” Hans, uyo akabhabhatidzwa papera makore anenge 30 kubva pakabhabhatidzwa mudzimai wake anobvumiranawo nazvo. Anoti: “Kuva nemufambiro wakanaka wechiKristu kunobatsira kuti hama yako ione kubatsirwa kwauri kuitwa nechokwadi muupenyu hwako.” Hama dzedu dzinofanira kuona kuti kusiyana kwatakaita nevamwe kunototibatsira kwete kutikanganisa.
“Kuva nemufambiro wakanaka wechiKristu kunobatsira kuti hama yako ione kubatsirwa kwauri kuitwa nechokwadi muupenyu hwako.”—Hans
Muapostora Petro akapa zano rinobatsira chaizvo vakadzi vane varume vasingatendi rokuti: “Zviisei pasi pevarume venyu, kuti kana paine vasingateereri shoko, muvawane nomufambiro wenyu pasina shoko rinotaurwa, nokuva kwavo zvapupu zvakaona mufambiro wenyu wakachena pamwe chete noruremekedzo rukuru. Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze, kwokuruka bvudzi uye kwokupfeka zvishongo zvendarama kana kwokupfeka nguo dzokunze, asi ngakuve munhu akavanzika womwoyo akapfeka chipfeko chisingaori chomudzimu wakanyarara uye munyoro, uyo unokosha kwazvo pamberi paMwari.”—1 Pet. 3:1-4.
Petro akanyora kuti murume anogona kubatsirwa nemufambiro wakanaka wemudzimai wake. Ichifunga nezvezano iroro romuMagwaro, imwe hanzvadzi inonzi Christa yave ichiedza kubatsira murume wayo kuti ade chokwadi nokuva nemufambiro wakanaka kubva payakabhabhatidzwa muna 1972. Kunyange zvazvo murume waChrista akambodzidza neZvapupu, haasati asarudza kushumira Jehovha. Akambopinda misangano uye anoshamwaridzana nevamwe vari muungano. Ivo vanoremekedzawo kodzero yake yokusarudza zvaanoda. Christa anoitei kuti abatsire murume wake?
Anoti: “Ndakatsunga kuita zvinodiwa naJehovha. Asi ndinoedzawo kuwana murume wangu “pasina shoko rinotaurwa” nokuramba ndiine tsika dzakanaka. Kana pasina mutemo weBhaibheri unotyorwa, ndinoita zvose zvandinokwanisa kuti ndiite zvinodiwa nemurume wangu. Uye ndinoremekedza kodzero dzake dzokusarudza zvaanoda ndosiya nyaya yacho mumaoko aJehovha.”
Zvinoitwa naChrista zvinoratidza kukosha kwokuva munhu anonzwisisa. Anoramba achiita zvinhu zvine chokuita nokunamata, kusanganisira kupinda misangano nguva dzose uye kubuda muushumiri. Asi anoratidza kunzwisisa achiziva kuti murume wake anodawo nguva naye uye kuratidzwa kuti anodiwa. Kuva munhu anonzwisisa kunokosha chaizvo kune vaya vane hama dzisingatendi. Bhaibheri rinoti, “Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa.” Izvi zvinosanganisira kuva nenguva nevomumhuri, kunyanya wawakaroorana naye asiri Chapupu. Kuva pamwe chete kunoita kuti mukwanise kukurukura. Zvakaitika zvinoratidza kuti kukurukurirana zvakanaka kunoita kuti vasanyanya kusurukirwa, vasaona sokuti havakosheswi uye vasaite shanje.—Mup. 3:1.
Holger uyo ana baba vakabhabhatidzwa papfuura makore 20 vamwe vomumhuri mavo vava Zvapupu anoti, “Zvinokosha kunyengeterera mumwe womumhuri uye kumuratidza kuti tinomuda.” Christa anotiwo ‘haazomborasi tariro yokuti murume wake achatsigira Jehovha ogamuchira chokwadi.’ Nguva dzose tinofanira kugara tiine tariro yokuti hama dzedu dzichagamuchira chokwadi.
Chinangwa chedu ndechokuti tirambe tiine ukama hwakasimba nehama dzedu, tidzipe mukana wokuwana chokwadi uye kuti dzibayiwe mwoyo neShoko raMwari. Uye pazvose zvatinoita, tinofanira kuva “nounyoro noruremekedzo rukuru.”—1 Pet. 3:15.
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2014